कसले गर्‍याे धनुषाधाम नगरपालिका कार्यालयलाई लक्षित गरी बम विस्फोट ?
३० जेठ २०७६ धनुषा: आज बिहान ९ः३० धनुषाधाम नगरपालिका कार्यालयलाई लक्षित गरी बम विस्फोट भएको छ । नगरपालिकको वडा नम्बर ३स्थित पुरानो धर्मशाला पूर्वपट्टी रहेको नगरपालिकाको सभाहलको पर्खालमा बमले क्षति पुर्याएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक हिरण यादवले भने, ‘हामी हिजो राति गस्तीमा भएको बेला विस्फोट वारे जानकारी पाए तर गएर हेर्दा रातिको समयमा केही बूझिएन आज विहान प्रहरी टोली जाँदा नगरपालिकको प्रयोग विहीन हलमा ह्वांग परेको र प्रेसर कुकरको बम विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाइएको छ ।’
बम विप्लव समूहले विस्फोट गराएको हुन सक्छ तर जिम्मा अहिलेसम्म कसैले न लिएको हिरण यादवले भने ।
बम कुनै किसिमको मानवीय क्षति नभएको र अवस्था समान्य रहेको प्रहरी निरिक्षक यादवले जानकारी दिएका छन । घटनास्थलमा अहिले थप अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएको यादवले सञ्चाकर्मीलाई जानकारी दिएका छन । बम विस्फोट भएको स्थान भन्दा झन्डै डेढ़ सय मीटर पर प्रहरी चौकी रहेको छ ।
WC 2019_Ind VS NZ: भारत या न्युजिल्यान्ड, कसले कसलाई जित्छ ?
आज सुनको मुल्य ६२ हजार ४ सय, हेर्नुहोस् तोलाको कति छ सुनचाँदीको मूल्य ?
बार्सिलोनाले आफ्नो मिडफिल्दर भिडाल बेच्दै,मुल्य कति ?
August 25th, 2019 August 25th, 2019